Orpheus နှင့် Eurydice ၏ Myth: အနှစ်ချုပ် - UniProyecta
ရှေးဟောင်း Olympus ၏ဒဏ္ologicalာရီဆန်သောဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Orpheus သည်ဂီတနှင့်ကဗျာကိုနှစ်သက်သည်မရ။ သူသည်သူ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်အနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးမှုတို့ကြောင့်အခြားနတ်ဘုရားများနှင့်ကွဲပြားသည်၊ ၎င်းသည်နည်းသည်မဟုတ်ပေ၊ သူသည်သူ့သီချင်းများအားသရုပ်ဖော်သည့်အတိုင်းသဟဇာတဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ဒီထူးခြားတဲ့ဂရိရုပ်ပုံကိုတွေ့ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာစွန့်စားခန်းမှာမင်းနဲ့ငါပူးပေါင်းချင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာသူ့မိဘတွေကဘယ်သူလဲ၊ သူ့ဘ ၀ မှာသူလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ မှောင်မိုက်တဲ့နေရာကနေသူ့အချစ်ကြီးကိုကယ်တင်ဖို့သူရဲကောင်းဆန်ဆုံးစွမ်းဆောင်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ မင်းသတ္တိရှိလား။
1 Orpheus နှင့်သူ၏မိဘများ
2 Orpheus ၏ဘဝ
3 Orpheus နှင့် Eurydice တို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်း
4 Orpheus နှင့်သူ၏ခရီးသည်
5 Orpheus သေဆုံးခြင်း
ဤမျှတန်ခိုးကြီး။ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သောဘုရားများအကြားတွင်သူတို့၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရည်အချင်းများဖြင့်ကျက်သရေနှင့်ပြည့်စုံသောအခြားသူများရှိလိမ့်မည်။ ထိုအရာသည် Orpheus အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည် Apollo ၏သားဂီတနှင့်အနုပညာ၊ ဘုရား နှင့် Calliope မှမော်ကွန်းကဗျာ၊ အာဝဇ္ဇန်းနှင့်သံစဉ်တေးသီချင်းများကိုသီဆိုဖျော်ဖြေသူသည်မယုံကြည်နိုင်စရာစုံလင်မှုနှင့်အတူအနုပညာအတွက်ဤအရည်အချင်းကိုသူရရှိခဲ့သည်။
သူ၏အဖေ Apollo သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောဘုရားဖြစ်သည်။ သူသည်အခြားသူများမရှိသောအရည်အချင်းများစွာကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ သူသည်အနုပညာပုံစံအားလုံးတွင်အလှအပရေးရာအတွက်တာဝန်ယူသည်၊ အနာရောဂါငြိမ်းခြင်း၊ ပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့် ဦး ညွှတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ထင်ရှားသည်။ သူမအမေသည်ကဗျာကို ၀ ါသနာပါ။ ခမ်းနားထည်ဝါသောကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုသူမလက်ထဲ၌အမြဲတမ်းတံပိုးမှုတ်နှင့်မြူးကြွစွာသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုကွောငျ့, Orpheus သည်သူ့မိဘများနှင့်ထိုက်တန်သောအနုပညာသဘာဝတစ်ခုဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်မရ။ သူသည်အလွန်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောဂီတနား ရှိ၍ သူ၏တေးသံမှတ်စုများသည်သူတို့၏ကြည့်ရှုသူအားမည်သူ့ကိုမျှမကြားစေဘဲအိပ်ပျော်စေသောနိမိတ်ပုံတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏အနုပညာစွမ်းရည်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချိုမြိန်စေခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
Orpheus သည်အခြားဒဏ္ologicalာရီလာဇာတ်ကောင်များကဲ့သို့ပုံမှန်မဟုတ်သောဘဝကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏တေးဂီတသံများနှင့်နေထိုင်မှုတိုင်းကိုစွဲဆောင်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့လှည့်လည်သွားပြီးသူမ၏ကျေးဇူးကြောင့်သူနှင့်သူ၏အဖော်များသည်ခက်ခဲသောအခြေအနေများမှလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့သည်။
ဒဏ္Legendာရီမှာဒီလိုရှိတယ် သူသည် Golden Fleece ကိုရှာဖွေရန်အလွန်ဝေးလံသောမြေများသို့ Argonauts များနှင့်ထွက်ခဲ့သည်မရ။ ၎င်းသည်ပင်လယ်၌သဘာဝလွန်သတ္တဝါများနှင့်ပြည့်နေသော Antemoesa ဟုခေါ်သောကျွန်းတစ်ခုသို့လျှို့ဝှက်ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်လှပသောရေသူမများဖြစ်ကြပြီးသူတို့၏ငြိမ့်ညောင်းသောအသံများသည်လူတို့ကိုသူတို့နှင့်အတူပင်လယ်ကြမ်းပြင်သို့ဆွဲခေါ်သွားသည်။
သင်္ဘောအတွင်းမှာထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတွေကသင်္ဘောသားတွေကိုပတ်ဖို့သီချင်းဆိုလာတယ်။ ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် Orpheus သည်သူ၏ lyre ကို ယူ၍ တေးဂီတမှတ်စုများကိုတီးခတ်သည် ၏ကျက်သရေ sirens များတစ်ဖန်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးနှင့် Fleece ကိုကာကွယ်သောသားရဲနှစ်ကောင်လုံးကိုစွဲမက်စေခဲ့သည်။
သူ၏ဘ ၀ ၌အခြားအရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်များမှာပညာသင်ယူရန်နှင့်ပြည့်စုံရန်ကွဲပြားသောနိုင်ငံများသို့ခရီးရှည်ကြီးများသွားခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းဆေးပညာ၊ စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းသင်ကြားသည် နှင့်ပင်စာရေးမရ။ နက္ခတ်ဗေဒင်၊ နက္ခတ်တာရာများနှင့်ကြယ်များ၏ရွေ့လျားမှုသည်မည်သို့ရှိသည်ကိုလည်းရှင်းပြသည်။
ဤဇာတ်ကောင်၏အဓိကလက္ခဏာမှာဂီတနှင့်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုတွန်းလှန်နိုင်သောအရာမရှိ၊ ၎င်းကိုနားထောင်သည့်အခါရော့ခ်များ၊ သစ်ပင်များ၊ မြစ်များနှင့်သက်ရှိမျိုးစိတ်အားလုံးသည်အံ့, ခြင်း၊ အသံမြည်နေစဉ်ကြားဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။
Orpheus နှင့် Eurydice တို့၏အချစ်ဇာတ်လမ်း
အလှပဆုံးသောအချစ်ဇာတ်လမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ Orpheus နှင့် Eurydice တို့၏ခံစားချက်၊ သစ္စာရှိမှုနှင့်တန်ဖိုးထားမှုတို့၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ သူမသည်အလွန်ရိုးရှင်းသော nymph ဖြစ်သည်၊ ထူးခြားသောအလှတရားနှင့်ချိုမြိန်သောအပြုံးတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမသည် Thrace မှဖြစ်သည်၊ Orpheus သည်သူမနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Zeus ၏ကောင်းချီးအောက်တွင်သူမနှင့်တစ်သက်တာအတူနေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
လှပသောနေ့တစ်နေ့တွင် Eurydice သည်အခြား nymphs များ၏အဖော်ကိုရှာဖွေ။ သူမနိုးလာသောအခါကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောမမျှော်လင့်သောအရာတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသည်။ အနီးအနားရှိမုဆိုး Aristeo သည်သူမအားချစ်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်တွင်သူမကိုပြန်ပေးဆွဲလိုခဲ့သည်။ စိတ်ပျက်အားငယ်နေသောမိန်းမငယ်သည်ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းများထဲသို့ပြေးသွားပြီးအန္တရာယ်ရှိသောမြွေတစ်ကောင်ကသူမကိုသေအောင်ကိုက်ခဲ့သည်။ Eurydice သည်လျင်မြန်စွာသေဆုံးသည်.
အသည်းကွဲသော Orpheus သည်သူ၏အလွန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆုံးရှုံးခြင်းမှခါးခါးသီးသီးခံစားခဲ့ရသည်။ သူ့ချစ်ဇနီးကိုရှာပြီးသူမကိုပြန်လာခေါ်ပါ.
ဟေးဒီးစ်သို့ခရီးသည်အလွန်အန္တရာယ်များသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သော်လည်း Orpheus သည်သူ၏ထာဝရချစ်ခြင်းအတွက်ငိုကြွေးခြင်းထက်သူ့ဘဝကိုကုန်ဆုံးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ သူရောက်တဲ့နေရာမှာ Styx မြစ်ကိုရောက်ခဲ့တယ် Charon သေဆုံးသူများကိုတင်ဆောင်လာသောသူ၏လှေ၌သူတို့ကိုဟေးဒီးစ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်မရ။ အဲဒီမှာသူကသူ့သီချင်းစာသားကိုထုတ်ပြီးနာကျင်မှုအပြည့်နဲ့ဆိုနာတာကိုတီးခဲ့တယ်။ သူတို့ကသူ့နှလုံးသားမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုဖော်ပြကြတယ်။ ရွှေ့ထားသောလှေသမားသည်သူ့ကိုအခြားတစ်ဘက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
Orpheus သည်သင်္ဘောမှဆင်းပြီးငရဲသို့ ၀ င်ရောက်စောင့်ရှောက်သောခေါင်းမာသောသားရဲသုံးကောင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်၊ သို့သော်သူမအားဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်တေးသွားကိုကြားသွားစေသည်။ Hades ဖြစ်ခြင်းသည်ငရဲ၏မိဖုရားနှင့်သဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်သည်။ လူမရ။ သူမနေရာမှထွက်သွားပြီးနေ၏ရောင်ခြည်ကိုမရမချင်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးသူမအားမကြည့်ခဲ့လျှင်သူသည် Eurydice ကိုယူသည်ဟုလက်ခံသည်။
သူသည်ထိုအဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံပြီး၎င်းသည်သူမအမှန်ဖြစ်ကြောင်းအသေအချာမသိဘဲမရဏကိုသူ့နောက်တွင်ထားခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့နိုင်ဘဲပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်။ Orpheus သည်နေ့အလင်းရောင်ရရှိသောငရဲအရိပ်များကိုကျော်ဖြတ်ရန်စီမံသော်လည်း၊ သူ၏အချစ်ကိုမြင်ရန်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့်သူမထွက်ခွာသေးသောအခါသူမကိုကြည့်သည်။ ထိုဆိုးရွားသောအမှား၏ရလဒ်သည်သူမအားသူ့အနား၌မထားနိုင်ဘဲကွယ်ပျောက်သွားခြင်းကိုမြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကသူ့မိန်းမကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ခံစားချက်ထပ်ပြောတာ၊ Styx Lagoon သည်သူတို့နှစ် ဦး အားကြီးကြီးမားမားချစ်မြတ်နိုးကြောင်းနှုတ်ဆက်သည့်မြင်ကွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ဒီအချိန်၊ ထာဝရ။ အသက်ရှင်ရန်ဆန္ဒမရှိသဖြင့် Orpheus သည်သူ၏သီချင်းသံဖြင့်သာလိုက်ပါသွားသည်။ သူလိုချင်တာကသူ့ချစ်ဇနီးကိုပြန်တွေ့ဖို့သေဖို့ဘဲ။
Thracian Bacchantes သည်သူ့ကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းလိုသောအခါသူ၏ဆန္ဒများပြည့်လာသည်။ သူကသူတို့ဆီကထွက်ပြေးဖို့တောအုပ်ကိုဖြတ်ပြီးပြေးပေမယ့်သူတို့ကသူ့ကိုလိုက်မီအောင်သတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Orpheus သည်နောက်ဆုံးတွင် Hades သို့ပြန်လာနိုင်ခဲ့သည် သူ၏ Eurydice နှင့်ထာဝရပြန်လည်ဆုံစည်းပါ ထာဝရရှင်သန်မယ့်အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ ဒါကအချစ်ကမည်သည့်အတားအဆီးကိုမဆိုကျော်လွှားနိုင်ပုံကိုပြသသည်၊ ၎င်းရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးသေခြင်းတရားသည်အဆုံးမရှိနိုင်ပါ။
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ယဉျကြေးမှု » ဂရိဒဏ္ာရီများ » Orpheus ၏ဒဏ္ာရီ
Catalan ကြိယာများ: စာရင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှု
“ Orpheus ၏ဒဏ္ာရီ” တွင်မှတ်ချက် ၁ ခု
15:2019 pm မှာအောက်တိုဘာလ 4, 58
Myths တွေအားလုံးကိုထူးချွန်တယ်၊ ငါတစ်ခုစီကိုသိခွင့်ရလို့အရမ်းပျော်တယ်